Imigaqo yokusebenza of Dryair Products - Hangzhou DryAir Unyango Co., Ltd
Kwiinkqubo imveliso, isiphumo angenzi ukufuma ngeemveliso bekusoloko kuyingxaki ...
Dehumidification Air i isisombululo akhulayo kwaye kuphunyezwa ngeendlela ezininzi: Indlela yokuqala zokupholisa umoya ngezantsi nombethe indawo yayo kwaye ukususa ukufuma yi amafu. Le ndlela iphumelela phantsi kweemeko apho indawo umbethe yi-8 - 10 o C okanye ngaphezulu; indlela yesibini ukufunxa ukufuma yi izinto desiccant. Imicu yodongwe-arhente buzane hygroscopic aneentunja zilungiswa kwi Iimbaleki yobusi-like. Ubume dehumidification ilula, kwaye ukufikelela -60 o okanye ngaphantsi C nge indibanisela ezizodwa izinto desiccant. Le ndlela okupholisa olusebenzayo izicelo amancinci okanye apho inqanaba ukufuma kulawulwa abangaxhalabisiyo; kwezicelo ezinkulu, okanye apho umgangatho ukufuma kufuneka alawulwe ukuya kwinqanaba elisezantsi kakhulu, desiccant dehumidification iyafuneka.
DRYAIR Systems zisebenzise okupholisa technology indlela, kwakunye amavili desiccant yesakhiwo yeselula. Njengoko kubonisiwe kulo mzobo, injini abanyhashe oku kwevili desiccant ku gqiba amaxesha-8 ukuya kwi-18 ngeyure nganye, kwaye ngokuphindaphindiweyo ibizela ukufuma usebenzisa intshukumo ngokutsha, ukuba ukunika umoya owomileyo. Ivili desiccant wohlulwe kwindawo ukufuma indawo ngokutsha; emva kokuba ukufuma emoyeni isuswe kummandla ukufuma kwi kweevili, lo blower uthumela umoya owomileyo egumbini. Ivili ukuba ithathe amanzi lijikeleza ukuya kwindawo ngokutsha, nomoya ngoko neenkcukacha zeposi (air eshushu) ithunyelwa phezu ivili ukusuka kwicala umva, ekhupha amanzi, ukuze ivili baqhubeke ukusebenza.
Umoya ahlume itshiswa kunye nokuba nezifudumezi umphunga okanye izifudumezi zombane. Ngenxa ngokweempawu ezizodwa gel abicah super ezinto-yokugalela kwi ivili desiccant, DRYAIR dehumidifiers nako ukuyiqonda dehumidification rhoqo phantsi izixa ezikhulu umthamo emoyeni, yaye ukuhlangabezana neemfuno isiqulatho ephantsi kakhulu sokufuma. Ngenxa ukufana indibanisela, isiqulatho sokufuma umoya baphathwe kunokuba ngaphantsi kwe 1G / kg umoya owomileyo (elingana lobushushu umbethe point -60 o C). DRYAIR dehumidifiers akhulule intsebenzo obuncamisileyo bhetele wabonakalaliswa kwiindawo ukufuma eliphantsi. Ukugcina lobushushu ezinzileyo zezulu owomileyo, uyacebiswa ukuba kuphole okanye shushu phezulu emoyeni dehumidified ngokufaka izixhobo air-moya okanye isifudumezi.
2.Principle kwezixhobo zonyango VOC:
Yintoni VOC concentrator?
VOC concentrator nga ngempumelelo azihlambulule kwaye sigxile VOCs emoyeni, zithwele umjelo wayediniwe mveliso mveliso. Ngokuthi kudityaniswe yokutshisa okanye izixhobo recovery ezinganyibiliki kakhulu, zombini iindleko zokuqala kunye yokusebenza kwenkqubo VOC sokupheliswa kube wancipha.
VOC xi plane yenziwa lobusi yephepha ezingaphiliyo njenge zeendawana, apho zeolite High-Silica (Ezinto aluxhaswanga) liza buzane. Le plane yahlulwe zayimimandla 3 ezifana ukucanda inkqubo, desorption kunye ukupholisa yi isakhiwo istili kunye nokumelana nobushushu air uphawu. Le plane njalo ajikeleziswe ngesantya ukujikeleza elilelona yi injini bafundisiwe.
Inqununu VOC concentrator:
Xa igesi VOC zeemoto abazono ziziimfumba udlula inkqubo kwindawo le plane leyo ziqhubela ajikelezwe, lo zeolite zomelele kwi plane liginya VOCs negesi lingadlulanga kukuba elibharhileyo lo kuma; VOC sathatha yinxalenye plane ke ngoko ajikeleziswe kummandla desorption, apho VOCs wendele ibe desorbed kunye nemali encinci desorption lobushushu eliphezulu umoya kwaye yayigxile ukuya kwinqanaba yoxinaniso eliphezulu (phinda-1 ukuya kwi-10). Emva koko, lo kanzulu igesi eliphezulu VOC ukhutshelwa kwiinkqubo zonyango sithuba olufanelekileyo ezifana kwesitovu okanye iinkqubo recovery; inxalenye desorbed ye ivili le ngakumbi ijikelezwe ku kwindawo okupholisa, apho ummandla lupholisiwe yi igesi okupholisa. Inxalenye ye VOC igesi zeemoto obukhatshwa le mveliso udlula izowuni okupholisa kwaye wasiwa sokufudumeza okanye imbawula lisenziwa shushu ngako yaye imfimfithwe njengoko umoya desorption.